Topnepalnews.com | नेपालको पहिलो स्याटेलाइट : अमेरिकाबाट यसरी पठाइँदैछ (प्रत्यक्ष प्रशारण समेत)
Posted on: April 17, 2019 | views: 21955
काठमाडौ । नेपालले अन्तरिक्षमा पहिलो पटक उपस्थिति जनाउँदैछ । अहिलेसम्म आफ्नो स्याटेलाइट नभएको नेपालले पहिलो पटक आफ्नो सानो आकारको भूउपग्रह अर्थात ‘नानो स्याटेलाइट’ अन्तरिक्षमा पठाउन लागेको हो ।
जापानको क्यूटेक विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत नेपाली वैज्ञानिक आभाष मास्के र हरिराम श्रेष्ठसहितको वैज्ञानिक टिमले भूउपग्रह अर्थात ‘नानो स्याटेलाइट’ निर्माण गरेको हो । भूउपग्रह निर्माणको नेतृत्व विश्वविद्यालयका वरिष्ठ अन्तरिक्ष वैज्ञानिकले गरेका छन । जसलाई प्रत्यक्ष रुपमा नेपाली वैज्ञानिक श्रेष्ठ र मास्केले सहयोग गरेका हुन ।
विश्वविद्यालयले आफ्नो ‘बर्ड–३’ परियोजना अन्तर्गत नेपाल, जापान र श्रीलंकाको ‘नानो स्याटेलाइट’ छुट्टाछुट्टै समयमा प्रक्षेपण गर्न लागेको हो । जसको संयोजन जापानको ‘ज्याक्सा’ले गर्नेछ । अन्तरिक्षको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अमेरिकाको नासा जस्तै जापानको ‘ज्याक्सा’ हो ।
नेपाल र श्रीलंकाले पहिलोपटक स्याटेलाइट पठाउन लागेका हुन् भने जापानले दुवै स्याटेलाइटको अनुगमन र नजिकबाट निरीक्षण गर्नेछ ।
नेपाली भूउपग्रहलाई ‘नेपाली क्यूबसेट स्याट–१’, श्रीलङ्काको ‘रावण–१’ र जापानको ‘यू–बिसु’ नाम दिइएको छ । तीनै स्याटेलाइट ‘नानो’ अर्थात सानो क्षमताका भएका नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टका प्रविधि संकाय प्रमुख वैज्ञानिक रवीन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाली स्याटेलाइट : जापानमा बन्यो, अमेरिकाबाट उड्ने !
नेपालले पहिलो पटक अन्तरिक्षमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन लागेको स्याटेलाइट जापानको क्युटेक विश्वविद्यालयमा बनेको हो । अन्तरिक्ष अनुसन्धानमा निकै अगाडि बढिसकेको यो विश्वविद्यालयले भूउपग्रह निर्माणदेखि प्रक्षेपणसमेत गर्ने गरेको छ ।
बिहीबार बिहान २ बजेर ३१ मिनेटमा अमेरिकाको भर्जिनियाबाट नेपालको स्याटेलाइट प्रक्षेपण गरिनेछ । नासाको मुख्यालयबाट नेपाली झण्डा र नास्टको लोगो अंकित स्याटेलाइट पहिलोपटक प्रक्षेपण हुनुले नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा पनि टेवा पुग्नेछ ।
यसअघि नेपालका कुनै पनि प्रविधि नासा मुख्यालयसँग जोडिएका थिएनन् । नेपालको विज्ञान तथा प्रविधिको विकासमा यो महत्वपूर्ण कोशेढुंगा हुने नास्टका वैज्ञानिकहरुको विश्वास छ ।
आउँदो तीन वर्षमा पूर्ण क्षमताको ‘मेगा स्याटेलाइट’ निर्माण गरेर प्रक्षेपण गर्ने महत्वाकांक्षी योजना बनाएको सरकारका लागि पनि यो ‘नानो स्याटेलाइट’ प्रक्षेपण सहकार्यको प्रस्थान बिन्दु बन्नेछ ।
‘नानो स्याटेलाइट’ प्रक्षेपणपछि पनि त्यसबाट आउने सबै जानकारी जापानकै विश्वविद्यालयबाट लिनुपर्नेछ । परीक्षणका रुपमा रहने नेपाली स्याटेलाइटलाई नासाले पनि आफ्नो निगरानीमा राख्नेछ ।
स्याटेलाइटबाट फाइदा के–के हुन्छ ?
यो स्याटेलाइटले तत्कालै तस्बिर पठाउनुबाहेक अरु काम गर्ने छैन । सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा अहिले भइरहेका सबै काम अन्तर्राष्ट्रिय स्याटेलाइटबाटै हुनेछन् । तस्बिरबाहेक नेपालको मौसमी अवस्था, पर्वतीय श्रृङ्खला, हिमनदीको अवस्थालाई अनुसन्धान गर्न पनि यसले सहयोग पुर्‍याउनेछ ।
बिहीबार रात अमेरिकाको भर्जिनियाबाट प्रक्षेपण हुने नेपाली स्याटेलाइटको नासाले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछ ।
प्रत्यक्ष प्रशारण हेर्न याँहा क्लिक गर्नुहोस् ।